भेरी अस्पतालमा जोडियो अक्सिजनसहितको ट्यांक – Nepal Press
भेरी अस्पतालमा जोडियो अक्सिजनसहितको ट्यांक
२०७८ जेठ ५ गते ७:३१
रुपन्देही । कोरोना प्रभावित बाँकेमा सबैभन्दा धेरै संक्रमित बिरामीको उपचार गरिरहेको भेरी अस्पतालमा अब अक्सिजन समस्या समाधान हुने भएको छ । बिरामीलाई अक्सिजन आपूर्तिमा सहजताका लागि भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा मंगलबार लिक्विड अक्सिजनसहितको ट्यांक जडान गरिएको छ ।
भेरी अस्पताल प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. प्रकाश थापाले भारतबाट लिक्विड अक्सिजन ल्याएर भण्डारण गरिएकाले अब अस्पतालमा अक्सिजनको अभावका कारण उपचार प्रभावित नहुने बताए ।
डा. थापाका अनुसार २० हजार लिटर क्षमताको ट्यांक जडान गरिएको भोलिपल्टै लिक्विड अक्सिजन भरिएको छ । सबै सिस्टम सेट भइसकेपछि ट्यांकबाट लिक्विड अक्सिजन सोझै पाइप हुँदै अस्पतालका शय्यामा पुग्छ । यसले भइरहेको सिलिण्डरको तुलनामा कम मूल्यमा अक्सिजन उपलब्ध हुनुका साथै सहज रुपमा बिरामीको बेडसम्म आपूर्ति हुने अस्पतालले जनाएको छ ।
संक्रमितको उपचारका लागि विभिन्न समयमा अक्सिजन अभाव भएका कारण सबै क्षेत्रमा त्रास उत्पन्न भएको थियो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धवलशमशेर राणाले अस्पतालमा यो सिस्टम लागू भइसकेपछि उपचारमा सहज हुने बताए ।
प्रकाशित: २०७८ जेठ ५ गते ७:३१